यसरी बनाउनुस् खसी र कुखुराका तीन परिकार
दिनेश गौतम काठमाडौं, १९ असाेज
दसैं खुशी र उमंगको पर्व हो । यो पर्वमा विशेषतः मीठो परिकारका खानामा जोड दिइन्छ । शाकाहारी र मांसाहारीले कस्ता परिकारको प्रयोग गर्ने ? मीठा–मीठा परिकार कसरी पकाउने ? कस्ता मसलाको प्रयोग गर्ने ? कति समय पकाउने ? यी विषयमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले दसैंमा प्रयोग गरिने नेपाली परिकार पकाउने विधिलाई हामीले समेटेका छौं ।
विशेषतः खाना तीन प्रकारका हुन्छन् । भागवत् गीतामा पनि खानालाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।
सात्विक शाकाहारी खाना हो । शाहाकारी खाना शरीर र दिमागका लागि अत्यन्त राम्रो हुन्छ । मानिसमा दया, माया, शान्ति, संयमताको भाव सात्विक खानाबाट प्राप्त हुन्छ । जस्तैः हरियो सागपात, फलफूल, कोसा, गेडागुडी, दही दूध र घिउ आदि पर्दछन् ।
राजसिक खानाले शरीर र दिमागमा उत्तेजना बढाउँछ । यो खानाको फाइदा बेफाइदा दुवै हुन्छ । खुशीको भाव जगाउन प्रेरित गर्ने भएकाले अधिकांशले राजसिक खाना प्रयोग गर्छन् । यो खाना बिरुवा र जनावबाट प्राप्त हुन्छ ।
तामसिक खानाको फाइदा बेफाइदा हुँदैन । तामसिक खाना राक्षसहरूले खाने पनि भनिन्छ । यो पनि बिरुवा र जनावरबाट प्राप्त हुन्छ । तामसिक खानाले मानिसमा क्रोध, अहंकार पैदा हुन्छ ।
दसैंमा प्रयोग गरिने नेपाली परिकार
दसैंमा सबैभन्दा बढी राजसिक खाना प्रयोग गरिन्छ । राजसिक खानामा मासुको प्रयोग गरिने परम्परा छ । मासुको विभिन्न परिकार बनाइन्छ ।
खसीको टाउकोदेखि खुट्टासम्मको परिकार बनाइन्छ । जस्तैः टाउको फ्राई, खुट्टाको झोल, मासुको झोल, फोक्सो र कलेजोको परिकार र भुटन । चिकेनको पाङ्ग्र्राको पनि परिकार बनाइन्छ ।
कस्तो मासुको प्रयोग गर्ने ?
ताजा मासु ल्याउने
राम्रोसँग सफा गर्ने
केही बेर मासुलाई उमाल्ने
उमालेको मासुलाई फेरि पखाल्ने
त्यसपछि किटाणु नष्ट हुन्छ
सानो पिस बनाउने
एक दिनका लागि फ्रिजमा राख्ने
एक दिनमा खाइनसके फेरि बेसार हालेर फ्राई गर्ने
फ्राई गरेको मासु ४८ घन्टासम्मका लागि खान सकिन्छ ।
खसीको मासुको परिकार
प्रेसर कुकरमा तोरीको तेल हाल्ने । तेलमा दुईवटा सुकुमेल, दुईवटा ल्वाङ, एउटा तेजपत्ता, मसिनो पारेर प्याज हालेर भुट्ने । अनि अदुवा र लसुन पिसेर हाल्ने ।
अदुवा र लसुनको काँचो बासना आउन छोडेपछि मासुको पिस हाल्ने । १० मिनेट चलाउँदै छोप्दै गर्ने । त्यसपछि नुन हालेर अर्को दुई मिनेट ढकनले छोप्ने ।
त्यसपछि जिरा, धनियाँ, रातो खुर्सानी र बेसारको धूलो हालेर चलाउने । फेरि टमाटर हालेर मासुलाई चलाउने । अनि गरम मसला हालेर ३ देखि ४ सिटी लगाउने । कराईमा पकाएको छ भने ४० मिनेट पकाउने ।
भुटनलाई राम्रोसँग सफा गर्ने । केही बेर उमालेर त्यसलाई सानो पिस बनाउने । त्यसपछि तेलमा १० मिनेट फ्राई गर्ने ।
नुन, बेसार, खुर्सानी, धनियाँ, जिरा र मिट मसलाको धूलो हाल्ने । मसला हालेपछि थप तीन÷चार मिनेट भुट्ने । त्यसपछि मसिनो प्याज हालेर फ्राई गर्ने ।
फोक्सोमा पाइप हुन्छ, जसलाई ट्राचिया भनिन्छ । फोक्सोको पाइपबाट पानी हालेर सफा गर्ने । मसलाको घोल बनाउने । खुर्सानी, जिरा र धनियाँ पाउडर हालेर घोल बनाउने ।
सफा गरेको फोक्सोको पाइमा घोल भर्ने । अनि २५ मिनेटसम्म दालचिनी हालेको पानीमा बोइल्ड गर्ने । त्यसपछि झिकेर सानो पिस बनाउने । पकाउने ताप्केमा तोरीको तेलमा बेसार हालेर फोक्सोको पिस हाल्ने । आवश्यक मात्रामा नुन हाल्ने । अन्तिममा प्याज हालेर भुट्ने ।
तोरीको तेलमा जिरा, मेथी, सुकुमेल र ल्वाङ हालेर डढाउने । त्यसपछि चिकेनको पिस हाल्ने । ७ मिनेटपछि मासु सेतो भएर आउँछ । अनि बेसार र प्याज हाल्ने ।
अर्को २ मिनेटपछि जिरा, धनियाँ र सुकेको खुर्सानीको धूलो हालेर चलाउने । थप ३ मिनेटपछि अदुवा र लसुन पिसेर हाल्ने । त्यसपछि टमाटर हाल्ने । टमाटर गलेपछि आवश्यक मात्रामा पानी हालेर ७ मिनेट जति पकाउने ।
चिकेन फ्राईको परिकार
काँचो मासुमा जिरा, धनियाँ र खुर्सानीको धूलो हालेर माड्ने । १० मिनेटपछि एक केजीमा एउटा अन्डा फुटाएर हाल्ने । अनि अदुवा र लसुनको पेस्ट हाल्ने । फेरि तेल हालेर मोल्ने । एक घन्टा त्यत्तिकै राख्ने । तेलमा आधा काँचो हुने गरी मासु पकाउने । त्यसपछि मासु झिक्ने ।
फेरि तेलमा जिरा, सुकेको खुर्सानी, प्याज र टमाटर हालेर केही बेर चलाउने । अनि फ्राई गरेको चिकेनको पिस हालेर ५ मिनेट चलाउने । थोरै पानी हाल्ने । लेदो भएपछि खानाका लागि उपयुक्त हुन्छ । यो परिकार चिउरासँग खान राम्रो हुन्छ ।
पाङ्ग्रालाई राम्रोसँग सफा गर्ने । अनि सानो पिस बनाउने । त्यो पिसलाई बोइल्ड गर्ने । तेलमा मेथीको दाना डढाउने । त्यसपछि बेसार हालेर १० मिनेट भुट्ने । नुन, धनियाँ र जिराको धूलो हाल्ने । त्यसपछि प्याज र टमाटर हाल्ने । अनि दुई मिनेट भुटेपछि खानाका लागि योग्य हुन्छ ।
लाई नियन्त्रण गर्न खल्पीको अचार वा अमिलो कुरा खान सकिन्छ । जसले अपच हुनबाट जोगाउँछ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज १९, २०७६, ०७:१८:००